Official Ubuntu 10.10 သုံးနည်း E Book ~ မျိုးကို
Official Ubuntu 10.10 သုံးနည်း E Book
03:56 Book, Ubuntu 1 comment
Ubuntu Manual Team ကြီးက “Getting Started with Ubuntu 10.10” လို့ အမည်ရတဲ့ Ubuntu OS အတွက် comprehensive guide ကို ထုတ်လိုက်ပါပီတဲ့..။ ဒီ official manual ဟာ Linux system ကို အရင်က မသုံးဖူးခဲ့တဲ့ User အသစ် တွေ အတွက် အထောက်အကူ ကောင်းဖြစ်မှာပါတဲ့ဗျာ...။Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) အတွက် ဒီ Guide က အထူး ဖြစ်ပီး 52 ခုထက်ပိုတဲ့ Language တွေနဲ့ Free ရရှိနိုင်ပါတယ်...။
ဒီ Guide မှာ 158 Pages နဲ့ အသေးစိတ် PDF manual မှာ decent layout နဲ့ အတူ Ubuntu နဲ့ စတင်ဖို့ အတွက် New Users တွေ အတွက် ကူညီဖို့ essential tips တွေကို ထည့်သွင်း ရေးသားထားပါတယ်တဲ့ ...။ လေ့လာဖို့လည်း လွယ်ကူစေပါတယ်..တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းပြချက်တွေ နဲ့ အတူ များစွာသော screenshots တွေနဲ့ပါ...။Ubuntu ကို မိတ်ဆက် အကျဉ်း ၊ installing OS အခြေခံ နဲ့ အတူ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာ ၊ Desktop နဲ့ အတူ Ubuntu နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ၊ထပ်ပြောရရင်တော့ hardware နဲ့ software တွေကို manage လုပ်နည်းများ ၊ ပြသာနာ တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် troubleshooting guide တွေကို လည်းထည့်သွင်း ရေးသားထားပါတယ်...၊နောက်ထပ်ကတော့ Terminal, basic security concepts, system updates, Firewall စတာ တွေကို မိတ်ဆက်ထားတဲ့ advanced users တွေ အတွက်လည်း Advanced Topics Section လည်း ရှိပါသေးတယ်...။
သူရဲ့ Features လေးတွေကို လေ့လာ ကြည့်ပါ...။
A printed version of Ubuntu manual is also available to buy online for $9.50 only.
လိုချင်ရင် တော့ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
Original Down link
Games And Softwares 21 November 2017 at 01:09
We all know about DropBox for free online file storage and sharing. But there are also many other companies IObit Driver Booster PRO 5.1.0.488 out there offering the same service for free like mediafire, hotfile, rapidshare,